Soo dejisan .NET Framework 4.6.81 iyo 4 – Vessoft
Soo dejisan .NET Framework
.net Framework – madal software ah lagama maarmaan u ah howlgalka codsiga software iyo web ku salaysan naqshadaha .net ah. software The lagu kala sooci karaa waafaqid oo kordhay leh # C, Visual Basic, iyo kuwa kala afka # barnaamijyada F. .net Framework taageertaa tiro balaadhan oo ah farsamooyinka casriga ah iyo qaababka sare in la abuuro codsiyada in ay yihiin in ay ka shaqeeyaan in ka deegaanno kala duwan iyo nidaamyada hawlgalka awoodaan. software ka kooban sal adag ee waxqabadka sare codsiyada Kombuyuutarada iyo Debug ee heerka tayada. .net Framework ku siinayaan shaqada la habaynteeda koodh caalamiga ah oo uu leeyahay set ah algorithms encryption.
Taageerada luqadaha barnaamijyada kala duwan
Ururinta xogta ogaanshaha
set A of algorithms encryption
.NET Framework Software la xiriira:
PDF Software ayaa si aad u eegto oo saxaa ah PDF-files. Software ka kooban yahay tiro balaadhan oo ah qalab reserved shaqada ugu wax soo saarka leh ee PDF-files.
العربية, English, Українська, Français... Telegram Desktop 0.9.18
English, Español, Deutsch, Português... Eeg software more